Football Khabar » चिलीविरुद्ध मेस्सी प्लेइङ–११ मा खेल्लान् ?
चिलीविरुद्ध मेस्सी प्लेइङ–११ मा खेल्लान् ?
ब्राजिलमा जारी कोपा अमेरिका फुटबलमा आज राति तेस्रो स्थानका लागि अर्जेन्टिना र चिली खेल्दैछन् । सेमिफाइनलमा पराजित यी दुई टिमका लागि यस संस्करणको यो नै अन्तिम खेल हुनेछ । यसअघि सेमिफाइनलमा चिली पेरुसँग ३–० तथा अर्जेन्टिना ब्राजिलसँग २–० ले हारेको थियो । आजको खेल राति ठीक १२ः४५ बजेबाट सुरु हुनेछ ।
आज राति हुने खेलमा अर्जेन्टिनी टोलीका कप्तान लिओनल मेस्सी सुरुआती टोलीबाटै खेल्नेछन् । खेलअघि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै कोच लिओनल स्कालोनीले चिलीविरुद्ध खास पविर्तन नहुने बताएका छन् । आज पनि अर्जेन्टिनाको आक्रमण लाइनमा मेस्सीसँगै लौटारो मार्टिनेज हुनेछन् । यस खेलमा मार्कोस अकुना भने प्रतिबन्धका कारण हुनेछैनन् ।
आज पनि पाउलो डिबालाले बेन्चबाटै खेल्नेछन् । आज एन्जल डि मारियाले सुरुआती टोलीमा स्थान बनाउने सम्भावना छ । अन्तिम खेल भएकाले स्कालोनीले यस खेलमा केही नयाँ खेलाडीलाई सुरुआती टोलीमा स्थान दिने सम्भावना छ ।
यता, चिलियन टोलीबाट आज केही खेलाडीका लागि भने अन्तिम खेल हुनेछ । सन् २०१५ र २०१६ टिमलाई च्याम्पियन बनाउन विशेष योगदान दिएका ३३ वर्षीय गोन्जालो जरा र ३५ वर्षीय जियन ब्युसेजोरका लागि सम्भवतः राष्ट्रिय जर्सीमा यो खेल नै अन्तिम हुनेछ । उनीहरूले कोपापछि सन्यास लिने तयारी गरेका छन् ।
प्रकाशित मिति २१ असार २०७६, शनिबार १५:४८